Dagaal ka billowday Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal ka billowday Muqdisho
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo kuwa NISA ayaa dagaal adag ku dhex marayaa xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.
MUGDISHO, Somaaliya - Dagaal xoog leh oo u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo ka soo hor jeeda Farmaajo iyo kuwo NISA oo daacad u ah Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ayaa ka socda degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir.
Dagaalkaan ayaa yimid kadib markii ciidamo milatari ah oo ka gadooday muddo kordhinta loo samaayey Farmaajo ay xalay soo gaareen degmooyinka waqooyi ee magaalada Muqdisho, isla markaaana maanta isku faafiyeen qaar ka mid ah xaafadaha caasimadda.
Degmada Cabdulcasiis, gaar ahaan aagga ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, ayaa ah halka ciidamadu isku farasaareen, waxaana dhawaqa rasaastu ka soo billaabatay Isgoyska Sanca.
Sida ay Keydmedia Online u xaqiijinayaan goob joogayaal, Ciidamada NISA , Waran iyo kuwa Gorgor oo gadaal uga biiray dagaalka ayaa laga itaal roonaaday, waxaana hadda halka loo yaqaan, Mirinaayo ku sugan ciidamada Militariga ee diidan muddo kordhinta.
Rasaasta ay labada dhinac is weydaarsanayaan ayaa si weyn looga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana la warinayaa in Ciidamada NISA ay hub ka soo qaateen AMISOM, si ay weerar ugu qaadaan guriga uu Xasan Sheekh Maxamuud ka degan yahay degmada Cabdicasiis.
Dhanka kale, Ciidamadii gadoodsanaa ee maanta la wereegay Fagax ayaa dib ugu laabtay degaanka Gubadley ee degmada Heliwaa, kadib markii ay wadahadallo la yeesheen Odayaasha degaanka.
Taliyayaasha Ciidamada godoodsan oo xalay la kulmay ergo Farmaajo ka socatay ayaa diiday in ay dib ugu laabtaan fariisimahodii, waxayna sheegeen in ay gali doonaan Madaxtooyada haddii aan laga laaban muddo kordhinta.
Xaaladda Muqdisho ayaa noqotay mid aan amni ahaan la isku hallayn karin, kadib markii 12-kii Apriil uu aqalka hoose Farmaajo u sameeyay muddo kordhin.